LEGO Mindstorms: रोबोटिक्स तीन पुस्तामा
पनि एउटा सानो सेट डिजाइनर "lego" हरेक बच्चा सपना। र स्मार्ट आमाबाबुले किनभने काम भागहरु संग मात्र तपाईं एक समय को लागि बच्चालाई लिन पनि राम्रो मोटर कौशल विकसित, अनुमति दिन्छ, तर बोली केन्द्र असर ईन्जिनियरिङ् कौशल विकास गर्न योगदान यो पूरा गर्नुपर्छ जो राम्रो इच्छा, भन्ने थाहा छ। साथै, खेल को मद्दत बच्चाहरु संसार र समाज सिक्न। कि "LEGO" किन सबै उमेरका लागि लाइनको एक सेट विकसित गरेको छ छ। उदाहरणका लागि, Duplo छोराछोरीलाई लागि उपयुक्त 1.5-5 वर्ष को एक श्रृंखला, मित्र लाइन बालिका लागि 5-12 वर्ष, शहर सुट केटाहरू 5-12 वर्ष, पुरानो लागि LEGO Mindstorms को एक विशेष सेट जारी डिजाइन गरिएको छ, राम्रो। यो असामान्य मा डिजाइनर यसलाई सिर्जना र कार्यक्रम को लागि एक प्रणाली छ, किनभने अलग कुरा हो।
सबै को पहिलो, यो अन्य श्रृंखला, यो सेट भिन्नता ध्यान महत्त्वपूर्ण छ "lego।" सिर्फ एक डिजाइनर, र तत्व र शक्ति आपूर्ति कि आंकडा सार्न र stimuli गर्न प्रतिक्रिया गर्न अनुमति को एक सेट छैन - को LEGO Mindstorms रोबोट भन्ने तथ्यलाई।
पहिलो पटक कम्पनी 1998 मा एक निर्माता जारी गरेको छ। तर, संस्करण आधुनिक सानो समानता ल्यायो। यो यस्तो धुरों, पाङ्ग्रा र गियर रूपमा मानक भागहरु प्रोसेसर संलग्न छन् जो एक सेट थियो, इन्फ्रारेड पोर्ट द्वि-दिशात्मक छ, साथ प्रदर्शन निर्मित वक्ता र सेन्सर एक नम्बर।
निस्सन्देह, घटक यस सेट विशेष pofantaziruesh छैन संग, र त्यो आज पाउन सकिन्छ भन्ने निर्देशन संख्या, हाय, थिएन। यद्यपि, यो निर्माता एक धेरै चलाउनु कारण र लामबद्ध LEGO Mindstorms जीवन दिनुभयो छ। सर्जकलाई श्रृंखला को क्षमताहरु र स्रोतहरू विस्तार मा राम्रो काम गरे र चाँडै बजार मा निर्माता को नयाँ संस्करण सुरु हुनेछ।
2006 मा, नाम थियो NXT दोस्रो Mindstorms रोबोट को, जेनेरेसन को बिक्री। यो यस श्रृंखला को धेरै संस्करण थिए टिप्पण लायक छ। 2009 मा उनले NXT 2.0, यसको predecessors देखि अलि फरक छ र 613 घन जसमा एक संस्करण प्रकाशित। यसलाई मा, मानक आधारभूत घटक बाहेक, त्यहाँ पहिले नै त्यो सम्मेलन विभिन्नता विविधता र सेट को कार्यक्षमता वृद्धि गर्न अनुमति बढी उन्नत तत्व हो। को NXT 2.0 किरा पनि समावेश:
3 servomotor, जो परिक्रमा सेन्सर रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
रंग सेन्सर, मुख्य रंग निर्धारण गर्न सक्षम।
दुई स्पर्श सेन्सर।
वस्तुहरु गर्न दूरी निर्धारण र आन्दोलन गर्न प्रतिक्रिया गर्न सक्ने अल्ट्रासोनिक सेन्सर।
axial र पंख काटन तंत्र जुन व्यक्ति भागहरु अनुमति एक अधिकता आन्दोलन परिणाम।
संग डिजाइनर रोबोट देखि संकलित यी सबै नवाचारै सानो भागहरु वा बल को रंग क्रमबद्ध सक्छ, त्यसैले सार्न र Maneuvers प्रदर्शन, अवरोध परहेज, र। डी एक धेरै उन्नत एमेच्योर एक घन-रूबिक निर्माण गर्न आफ्नो आफ्नै लडाकु कार्यक्रम गर्न सक्षम थिए। तथापि, सायद यो सिर्फ एक मिथक छ?
आधुनिक EV3 2013 मा बजार मारा सेट र डिजाइनर को भाग उन्नत गरिएको छ रूपमा तुरुन्तै, प्रशंसक धेरै फेला, यो सेन्सर र सेन्सर समेत थप विविधता देखियो। यसको विशिष्ठ सुविधा सञ्चालन प्रणाली LINUX थियो, र 16 मेगाबाइट RAM वृद्धि। साथै, प्रदर्शन ठूलो भयो, यो वाइफाइ र ब्लुटुथ लागि समर्थन थप्छ। यो सबै निर्माताहरू प्रशस्त अप सपना अनुमति दिएको छ! LEGO Mindstorms निर्देशन आधिकारिक वेबसाइट मात्र 17 विधानसभा विकल्प (बक्समा त्यहाँ केवल एक मोडेल को लागि एक पुस्तिका छ) उपलब्ध 601 भागहरु को हो। र 50 भन्दा बढी मोडेल उत्साही फोरम मा पाउन सकिन्छ!
LEGO Mindstorms शिक्षा
यो त विचार कुनै पनि विवरण हराइरहेको छैन भनेर हुन्छ। तिनीहरूलाई रूस मा अलग किन्न असम्भव छ, र एक लागि गियर को technic श्रृंखला को एक महंगा सेट लिन बन्न हुनेछ। कम्पनी भनेर हेरविचार लिएको छ! आज, सेट LEGO Mindstorms शिक्षा प्रतिनिधित्व स्रोत को ध्यान लागि। आफ्नो बच्चा खुसी हुनेछ भनेर तिनीहरूले, विभिन्न भागहरु को अझ ठूलो संख्या समावेश। अक्सर शैक्षिक संस्थाहरू मा शिक्षा, मा साथै प्रस्तुत जो मग "LEGO" -konstruirovaniya रचनात्मकता को अवकाश केन्द्र, प्रयोग गरिन्छ। तैपनि, सबै पछि, आधारभूत सेट साथ पुरा 1418 भागहरु, जो तपाईं सबैभन्दा विश्वास नलाग्दो रोबोट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ!
शिक्षा पनि विश्व प्रतियोगिताहरु मा प्रयोग सेट गर्छ। तिनीहरूले pupils र विद्यार्थी बर्ष 10 21 वर्ष समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा ओलम्पिक भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु रोबोट (MSR)। रूस मा, तिनीहरूले4चरणमा सम्पन्न छन्, र विजेता रोबोट को गर्मी शिविरमा एक यात्रा सम्मानित गरिनेछ!
आमाबाबुको लागि सुझाव: सिक्न एक किशोरी कसरी जबरजस्ती गर्न
किन छोराछोरीको बादल मूत्र छ?
सुझाव र चाल: कसरी एक मग पिउन आफ्नो बच्चा सिकाउन। बच्चाहरु को लागि व्यञ्जन
छत र पर्खाल लागि "IZOSPAN" वाष्प बाधा प्रयोग
ल्याटिन मा इथानोल नुस्खा
ब्रोकोली उपवास संग Cutlets: व्यञ्जनहरु, क्यालोरी र सिफारिसहरू
Overlock खुट्टा: वर्णन, पद। सिलाई-मिसिन
आपराधिक अभियोजन को अवधि (आपराधिक कोड)। मामला अध्ययन
टाटा सोलारिस Hatchback राष्ट्रिय कार हुनेछ?
एक घर केचप कसरी खाना पकाउनु